QISADII NABI CIISE Gaaldiid
Bogga Hore > Xogta > QISADII NABI CIISE
Nabi Ciise (N.N.K.H) waa nabigii ugu danbeeyey ee reer banu Israel, waxaanu ka mid yahay shanta nabi ee Ulul-Cazmiga. Nabi Ciise dhalashadiisa waxay ahayd mid mujiso ah, waana ruuxdii iyo kalmadii Eebe uu ku tuuray Mrayama.
Nabi Ciise (N.N.K.H) waxa abuuray Eebe, kana yeelay qof aan aabo lahayn, sidii uu u abuuray Nabi Aadam oo kale asagoon lahayn Aabo iyo hooyatoona
Nabi Ciise hooyadii Maryama, markay ku qaaday uurka Ciise ayey reer bani Israel ku eedeeyeen Maryama inay ka mid tahay dumarka la tuhmo. Xaashee manaysan ka mid ahayn.
Maryama waxay ula timid Ciise qoomkeeda ayadoo xambaarsan, waxayna ku dhaheen Maryaneey waxaad la timid wax wayn, mana ahayn aabahaa ruux xun, mana ahayn hooyadaa ruux la tuhmo, ee xagee ka keentay wiilka aad sidato. Maryama (N.N.K.H) waxay u ishaartay qoomkedii Ciise xaggiisa, waxayna dhaheen sidaan ula hadalnaa sabi yar oo ku jira sariirta caruurta.
Nabi Ciise oo sabiya ayaa yidhi “anigu waxaan ahay adoonkii Eebe, wuxuuna isiiyey kitaabka (Injiil) igana yeelay Nabi iyo ruux barakaysan meel kasta oon joogo, iina dardaarmay salaada iyo zakada intaan noolahay, sidoo kale waxa uu Eebe ifaray inaan u baari noqdo hooyaday, igamana yeelin ruux madax adag, Nabadgalyana ha ahaato maalintii lay dhalay, maalintaan dhiman iyo maalinta laysoo bixin anoo nool”
Nabi ciise dhalashadiisii kadib waxa isa soo urursaday Shayaadiinta, si ay u dhibaateeyaan cunga yar, wayna soo baadi dooneen kana haleen Falastiin, gaar ahaan magaalada (Bayt-laxmi) hase ahaatee waxa agtiisa joogay malaa’ig ilaalinaysa, manay awoodin inay usoo dhowaadaan. Rasuulka waxa laga wariyey (N.N.K.H) ruux kasta shaydaanku waa gujiyaa markuu dhasho marka laga reebo laba ruux mooyaane waa Maryama iyo wiilkeeda Nabi Ciise, sabatoo ah waxa u ducaysay Maryama hooyadeed ayada iyo durriyadeedaba.
Nabi Ciise asagoo da’diisu yartahay ayuu ka warrami jirey waxay cunayaan iyo waxay guryahooda ku kaydsadeen ee cunto ah.
Markay mucjisooyin badan arkeen ayey reer banu Israel dooneen inay dilaan Nabi Ciise, sidaad darted ayaa la faray hooyadii Maryama inay ka baxdo Baytlaxam, una safraan goob kale oo ka nabdoon dhulka barakaysan ee Falastiin, Maryama oo sidata wiilkeedii waxay u safreen dhulka Masar. Mudo kadib ayey ku soo noqdeen dhulka Falastiin. Nabi Ciise markuu qaangaaray ayuu dacwadii gaarsiiyey qoomkiisii, waxaana la jeclaysiiyey khalwada iyo inuu ilaahay kaligii caabudo.
Maalin maalmaha ka mida ayaa Nabi Ciise la kulmay haweenay dul fadhida qabri oo oynaysa, qabriga waxa ku duugnaa gabar ay dhashay. Nabi Ciise waxa uu waydiiyey sababta ay la ooyayso, waxayna ku tidhi Nabigii Ilaahayoow waxaan nadar ku galay inaan gabartayda arko ama aan ku dul dhinto qabrigeeda.
Nabi Ciise (N.N.K.H) waxa uu u yidhi Eebe ayaan kuu baryi si aad u aragto gabartaadii, markaas ayuu baryey Eebe, kadibna Nabi Ciise waxa uu amray qabrigii inay ka soo baxdo haweenaydii idinka Eebe, qabrigii waa gilgilmay, hadana waa ku celiyey weedhiisii soo bax idinka Eebe, hadana qabrigii waa gilgilmay, markii sadexaad aya qabrigii dillaacay oy kasoo baxday gabartii oo timaheedii cirraysteen.
Gabartii waxay tidhi markii hore ee qabrigu gilgilmay waxa uu Eebe faray in laysu keeno jirkaygii, markii labaadna Nafta ayaa laygu afuufay, makii sadexaadna qabiriga ayaa dillacay waxaanan mooday in qayaamihii dhacay sidaa darteed ayey timihii ii cirraysteen.
Gabartii waxay fiirisay hooyadeed kuna tidhi iska samir hooyo, kana cabso Ilaahay, kadibanwaxay ka dalbatay Nabi Ciise in ay dib ugu laabato qabrigii, ayadoo aan dareemin xanuunka geerida mar labaad. Nabi Ciise waxa uu u baryey Eebe maraasy gabartii geeriyootay ayadoo dareemin xanuunka geerida kadibna lagu aasay qabrigeedii.
Nabi Ciise (N.N.K.H) waxa amarka Eebe indhaha u fiiqi jiray dadka indho la’aanta ku dhashay, waxaanu masixi jiray dadka qaba jirrada baraska. Nabi Ciise waxa kale oo uu samayn jiray dhoobo u suuarda eeg shinbiraha, kadibna waa afuufi jirey markaasay duulaysay amarka Eebe. Dhammaan waxaasoo dhan waxay ahaayeen aayado, calaamado iyo astaamo mucjiso oo lagu aamino rasuulkii Eebe hase ahaatee reer banu Israel badankoodii way ka gaaloobeen.
Reer babnu Israel way dhibeen Nabi Ciise iyo hooyadii Maryama wayna u samreen qoomkoodii dhibta iyo aflagaadada ay dhurayeen.
Saxaabadii Nabi Ciise waxa loogu yeedhaa Xawaari, sababtoo ah way rumeeyeen nabinimadiisa iyo mucjisaadka uu tusayay.
Maalin maalmaha ka mida ayey Xawaaridii ka dalbadeen Nabi Ciise inuu Eebe u baryo, in samada looga soo dajiyo xeedho ay cunaan, si ay quluubatanadana u xasisho, oon u ogaano inaad run noo sheegtay sidoo kale u noqono kuwa ka marag kaca.
Nabi Ciise (N.N.K.H) waxa uu Eebe ka dalbaday xeedhadii, asagoo leh “Eeboow nooga soo daji xeedho samada, noo noqoto ciid iyo aayad xaggaaga ka timdi, nana arsaaq waxaad tahay arsaaqe khayr roone”
Eebe waa usoo dajiyey xeedhadii oy ku jirto cuntooyin kala duwan, oon dhulka hore looga cunin. Markay xeedhadii timid ayuu Nabi Ciise faray inay cunaan cuntada Eebe ku arsaaqay, kadibana way cuneen. Dhammaan cidii cuntay xeedhada waxa Eebe ka dul qaaday xanuunadii hayey, waxayna u noqotay mucjiso kale oo aad u wayn.
Nabi Ciise (N.N.K.H) waa sii waday dacwadii, reer banu israelna waxay u maleegayeen dhagar ayagoo ku fakarayey si ay u khaarijin lahaayeen rasuulka Eebe. Maray arkeen in da badan rumeeyey Nabi Ciise ayey kaashadeen boqoro, ayagoo ka beesheegaya NabiCiise, waxayna ku dhaheen Ciise waa idinku duulaan oo wuxu doonayaa inuu boqortooyadaada idin ka qaado.
Boqortooyadii iyo reer banu Israel oo iskaashanaya ayaa soo weeraray Nabi Ciise asagoo la fadhiya 12 xawaaridiisa, kadibna Nabi Ciise waxa uu ka dalbaday xawaaridii mid ka mida oo Eebe ka yeelo shabihiisa, asguna noqda mid ila rafiiqa jannada.
Midkii ugu da’da yaraa xawaaridii ayaa ajiibay oo u hibeeyey naftiisa Nabi Ciise. Ciidamadii waxay soo garaaceen albaabkii, balse Eebe waxa uu sare u qaaday Nabi Ciise.
Qoomkii raadinaayey Nabi Ciise waxay helaan shabihiisii kadibna way salbiyeen ayagoo mooday in ay dilaan masiixii Nabi Ciise (N.N.K.H)
Malakul Jibriil ayaa uga warramay Maryama in Nabi Ciise sare loo qaaday uuna soo noqonayo aakhir samaanka, waxaanu dili doona Dajaalka sheegan doona ilaaha.